महालेखाको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक, ११ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड बेरुजु ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, २९ चैत, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । वि.स. २०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनले यो वर्ष बेरुजु बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा बेरुजुको अद्यावधी गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम गत वर्षको तुलनामा बढेको उल्लेख गरिएको छ । यता प्रतिव्यक्ति ऋणसमेत वृद्धि भएको देखाएको छ । यस वर्ष नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति ऋणभार ३१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यो रकम गत वर्षभन्दा ७ हजार ४३ रुपैयाँले बढी हो ।
महालेखाले यस वर्ष ६ हजार ६ सय ४४ निकायको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखापरीक्षणमा ११ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड बेरुजु भएको देखाएको छ । यो रकम गत वर्षको तुलनामा ५ दशमलब २९ प्रतिशत बढी बेरुजु रकम हो ।
महालेखाले संघीय सरकारी कार्यालयको ४ हजार ८ सय ४१, प्रदेश सरकारी कार्यालय ६८, स्थानीय तह ७ सय ४७ र समिति र अन्य ८ सय ६२ संस्था र संगठित संस्थान प्रतिष्ठानलगायत नेपाल सरकारको स्वामित्वका ९९ संस्थानको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यो वर्ष ७ प्रदेशको २ अर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षणमा १९ करोड ५१ लाख अर्थात् ७ दशमलब २५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी, ७ सय ४७ स्थानीय तहको ५ अर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको लेखापरीक्षणबाट २४ अर्ब १४ करोड बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी ७ दशमलब २५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
यस वर्ष २२ विषयको कार्यमुलक, ३ विषयको सूचना प्रविधि, एउटा वातावरणीय र दुई विषयको विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखासँग परामर्श लिएर नेपाल सरकारका विभिन्न ३० वटा संस्थाले लेखापरीक्षण गरेका छन् । ती संस्थाको ७ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोडको लेखा परीक्षण भएको हो । जसमा यस वर्ष ५९ खर्ब ७२ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । यसमध्ये १८ सय ५४ वटा कार्यालयको लगती असुल गर्नुपर्ने बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
सरकारी कार्यालयतर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख बेरुजुमध्ये ३२ अर्ब ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नु पर्ने बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ नियमित पेश्की र असुल गर्नुपर्ने गरी १९ करोड ५१ लाख र स्थानीय तहमा २४ अर्ब १४ करोड १६ लाख बेरुजु देखिएको छ । यस वर्ष गत वर्षसमेत अद्यावधी गरी ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: 2019-04-12 2019-04-12 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वार्षिक प्रतिवेदन
ओम प्लाई उद्योगमा आगलागी हुँदा करोडौंको क्षति
कुटपिटबाट जन्ती गएका पुरुषको मृत्यु, १५ जना पक्राउ
Tags: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, वार्षिक प्रतिवेदन